बिपिसीद्वारा नगद लाभांश पारित, ८८ हजार सेयरधनीलार्इ ४४ कराेड बाँडिने - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
बिपिसीद्वारा नगद लाभांश पारित, ८८ हजार सेयरधनीलार्इ ४४ कराेड बाँडिने
जेठ ०८, २०७५ 5764 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) ले आफ्ना सेयरधनीलाई छुट्टयाएको करिब ४४ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश साधारणसभाले पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको कम्पनीको २५औं वार्षिक साधारणसभाले लाभांश पारित गरेको हो ।
कम्पनीले नयाँ सेयर (फर्दर पब्लिक अफरिङ–एफपिओ) जारी गरेपछि चुक्ता पुँजी २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त रकमको २० प्रतिशतले हुन आउने ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ सेयरधनीलाई लाभांश बाँडिनेछ । कम्पनीमा ८८ हजार सेयरधनी छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मुनाफा कमाएको थियो । उक्त मुनाफाबाट नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । कम्पनीको गत चैत २५ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले लाभांश दिने निर्णय गरेको थियो ।
कम्पनीले हालै आफ्नो चिनिया साझेदार (एससिआइजी इन्टरनेशनल लिमिटेड, सिल्चेन इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र क्यूवाइइसी इन्टरनेशनल कम्पनी) सँगको संयुक्त लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।
कम्पनीले मनाङमा ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ तथा २ सय ८२ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी निर्माण गर्न दुवै आयोजनाको सेयर खरिद गरेको छ । दुई आयोजनाको बीचमा कम्पनीले नै अध्ययन गरेको १ सय ४० मेगावाटको लोअर मनाङ मर्स्याङ्दी छ ।
यसैगरी, कम्पनीले इन्फ्राको एसियासँगको संयुक्त लगानीमा हाल ३७.६ मेगावाटको कावेली ‘ए’ तथा स्थानीय साझेदारसँगको संयुक्त लगानीमा ३० मेगावाटको न्यादी निर्माण गरिरहेको छ । मनाङस्थित ८.५ मेगावाटको चिनोखोला साना जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गरिरहेको छ ।
हालै कम्पनीले १ सय ६० मेगावाटको मुगु कर्णालीको अध्ययन सुरु गरेको छ । उल्लेखित आयोजनको सफल कार्यन्वयन गर्न सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यसबाट सेयरधनीको दीर्घकालीन हित सम्बर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।